Football Khabar » के ग्वार्डिओला सिटी छाडेर युभेन्टस जाँदैछन् ?
के ग्वार्डिओला सिटी छाडेर युभेन्टस जाँदैछन् ?
इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीका प्रशिक्षक पेप ग्वार्डिओलालाई इटालियन युभेन्टसले अनुबन्ध गर्न चाहेको चर्चा अहिले पनि छ । अझ युभेन्टसका प्रशिक्षक मासिमिलानो एलेग्रीले यो सिजनको अन्त्यसँगै क्लब छाड्ने घोषणा गरेपछि यो चर्चा थप बढेको छ ।
युभेन्टसले नयाँ सिजनका लागि अनुबन्ध गर्न चाहेका प्रशिक्षकमध्ये सबैभन्दा पहिलो नम्बरमा ग्वार्डिओला रहेको बताइन्छ । तर, यो सिजन सिटीलाई घरेलु लिगको च्याम्पियन बनाएका ग्वार्डिओला स्वयंले भने यसलाई नकारेका छन् ।
सिटीले आज राति एफए कपको फाइनलमा वाटफोर्डको सामना गर्दैछ । सो खेलअघिको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ग्वार्डिओलाले आफू युभेन्टस जाने सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारे । पत्रकार सम्मेलनमा ‘के तपाईं युभेन्टस जाँदै हुनुहुन्छ ?’ भनेर सोधिएको थियो ।
पत्रकारको प्रश्नमा ग्वार्डिओलाले कडा उत्तर दिए । ‘म युभेन्टस जाँदै छैन भनेर मैले अझै कतिपटक भन्नुपर्छ,’ ग्वार्डिओलाले भने, ‘कृपया, अबदेखि मलाई यो प्रश्न नसोधिदिए म खुसी हुनेछु ।’
अर्को प्रसंगमा ग्वार्डिओलाले आफूहरू कपको उपाधि जित्न तयार रहेको बताए । ‘यो सिजनलाई थप राम्रो बनाउन हामीले यो उपाधि जित्नुपर्छ,’ ग्वार्डिओलाले भने, ‘मेरा खेलाडी तयार छन् ।’
प्रकाशित मिति ४ जेष्ठ २०७६, शनिबार ०४:५९